ဝီဂါတွေပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုမှာ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကို တရုတ်က ဘယ်လိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့သလဲ - News @ M-Media
ဝီဂါတွေပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုမှာ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကို တရုတ်က ဘယ်လိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့သလဲ
in ကမာၻ႔မြတ္စလင္ သတင္းမ်ား / အာရွ-ပဖိဖိတ္ / ႏိုင္ငံတကာသတင္း — September 10, 2021
စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
Kent Kobersteen, former Director of Photography of National Geographic
“The pictures are by Robert Clark, and were shot from the window of his studio in Brooklyn. Others shot the second plane hitting the tower, but I think there are elements in Clark’s photographs that make them special. To me the wider shots not only give context to the tragedy, but also portray the normalcy of the day in every respect except at the Towers. I generally prefer tighter shots, but in this case I think the overall context of Manhattan makesastronger image. And, the fact that Clark shot the pictures from his studio indicates how the events of 9/11 literally hit home. I find these images very compellingÑin fact, whenever I see them they force me to study them in great detail.”
(တကယ်တော့ အမေရိကန်ရဲ့ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ကြောင့် ဝီဂါတွေအပါအဝင် ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော မွတ်စလင်တွေရဲ့ဘ၀တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ )
-‘ဝီဂါအကြမ်းဖက်ဝါဒ’ ဆိုတဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်မှုကို အမေရိကန်က လက်ခံလိုက်တာဟာ ဝီဂါလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် တရုတ်အစိုးက အကြီးအကျယ် ဖိနှိပ်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်ကျန်းပြည်နယ် ဝီဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသက အခြေအနေတွေဟာ အလွန်အမင်း ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ ဝီဂါတွေထဲက အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ ဖိနှိပ်မှုကနေ ၂၀၀၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစွန်းရောက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုကို တရုတ်အစိုးရက အကြီးအကျယ် ကျူးလွန်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အမေရိကန်ဟာ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ဆင်နွှဲကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရှင်းလင်းရေး အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ‘ခွဲထွက်ရေးလုပ်တဲ့ ပြည်တွင်းပြဿနာ’ လို့ အရင်က သတ်မှတ်တုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဝီဂါတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ‘ကမ္ဘာ့အကြမ်းဖက်ဝါဒ အရေးပေါ်အခြေအနေ’ အဖြစ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CCP) က ပုံဖော်လိုက်တာဟာ ၉/၁၁ နောက်ပိုင်း ကိစ္စတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
CCP ရဲ့ ဒီပုံဖော်မှုကို အမေရိကန်က ချက်ခြင်းဆိုသလို လက်ခံကာ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ မထင်မရှား အရှေ့တာကစ္စတန် အစ္စလာမ့်မစ်လှုပ်ရှားမှု(ETIM) ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝီဂါတွေကိုလည်း နာမည်ဆိုးရှိတဲ့ ဂွါတာနာမိုအကျဉ်းစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဝီဂါလူမျိုး တစ်သန်းလောက်ကို အကျဉ်းစခန်းကွန်ယက်တွေထဲမှာ ပိတ်လှောင်ထားတယ်လို့ ကုလက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိစ္စအပါဝင် ဝီဂါလူမျိုးစုအပေါ် တရုတ်အစိုးရက အကြီးအကျယ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အမေရိကန်ရဲ့ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ က အကူအညီပေးခဲ့တာပါ။
ဝီဂါတွေ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသဟာ အလ်တီရှာ၊ အရှေ့တာကစ္စတန်၊ ရှင်ကျန်း စသဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုးတွင်ပါတယ်။ ၁၇၅၉ ခုနှစ် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်မှာ ဝီဂါဒေသကို သိမ်းပိုက်ကာ ‘ရှင်ကျန်း’ (ပိုင်နက်သစ်) လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းမှာ သူပုန်ထမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ဝီဂါဒေသဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သာ ဆက်ရှိနေပြီး ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ CCP ခေါင်းဆောင် မော်စီတုန်းက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ၁၀ စုနှစ်တွေမှာ ရှင်ကျန်းဒေသအတွင်း စီးပွားရေးနဲ့ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာပြီး ‘ဟန်’ မဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက် အားသာချက် ရှိလာခဲ့ပေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို စျေးကြီးပေးပြီး အသုံးပြုရတာမျိုးပါ။ နောက်ပိုင်း ဟန်လူမျိုးတွေ ဒေသထဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့လာတာကြောင့်​ သူ့တို့ရဲ့ ဘိုး​ဘွားပိုင်မြေကနေ ဝီဂါတွေ ဖယ်ပေးခဲ့ရပြီး တင်းမာမှုတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
ရှင်ကျန်းမှာပေါ်​ပေါက်လာတဲ့ ဝီဂါတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာ ဒီလို လူအဖွဲ့အစည်း ဟန်ချက်ပျက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း နည်းလာတာ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝီဂါတွေ စိုးရိမ်ပူပန်လာရာကနေ ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်း ရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာ လူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
ရှင်ကျန်းဒေသအတွင်း ခွဲထွက်လိုတဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာရာမှာ ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူ ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့ ဌာနေဝီဂါတွေအကြား ဒီလို မမျှတမှုတွေက အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝီဂါတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်လို့ ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီး ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့ သူတို့မှာ အာဏာမရှိပါဘူး။ အစိုးရပေါ်လစီတွေကို ဆန်ကျင်တဲ့ ဒေသတွင်း ဆန္ဒပြမှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြိုခွဲခံရကာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တီယန်နန်မန်ရင်ပြင် ဖိနှိပ်မှုနောက်ပိုင်း တရုတ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဝီဂါလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လှုပ်ရှားမှုတွေ အလျှိုအလျှို ပေါ်ထွက်လာပြီး အထင်ရှားဆုံးက အရှေ့တာကစ္စတန် သတင်းအချက်အလက်စင်တာနဲ့ ကမ္ဘာ့ဝီဂါလူငယ်ကွန်ဂရက် အဖွဲ့အစည်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွေမှာ ရှင်ကျန်းပြည်နယ်မြို့တော် အွမ်ရူကီက အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းတွေနဲ့ ရဲစခန်းတစ်ခုတို့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ‘အရှေ့တာကစ္စတန် ခွဲထွက်ရေးသမားတွေ’ က လုပ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ခွဲထွက်ရေးဝါဒကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ‘ကြမ်းကြမ်းတိုက်’ စစ်ဆင်ရေးကို စတင်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်း တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးတာ၊ ခွဲထွက်ရေးလုပ်တယ်လို့ သံသယရှိသူကို အလျင်အမြန် ရှင်းလင်းသုတ်သင်တာတွေ လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေအပေါ် ဘယ်လိုဝေဖန်ပြစ်တင်မှုမျိုးကိုမဆို ခွဲထွက်ရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တရုတ်အစိုးရက ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နင်းတယ်လို့ ဝီဂါအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ တိုက်ခိုက်မှု​တွေကို ဝီဂါခွဲထွက်ရေးသမားတွေ လုပ်တာလို့ မမှန်မကန်စွပ်စွဲပြီး ဝီဂါတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုတွေ တရားတယ်လို့ ပုံဖော်တာမျိုးတွေအထိ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်မှာဖြစ်တဲ့ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုက တရုတ်ရဲ့ ခွဲထွက်ရေးတိုက်ဖျက်မှုလုပ်ငန်းကို လမ်းကြောင်းအသစ် ပြောင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဂျ် ဒဘလျူ ဘုရှ်က ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ဘက်နေမလား၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေဘက်နေမလားဆိုပြီး ရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ တစ်ဖက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို တိုက်တွန်းတဲ့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ တရုတ်က ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ရဲ့ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ကို ထောက်ခံကြောင်း သဘောထားပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လူသိပ်မသိတဲ့ ဝီဂါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ETIM ကို ကမ္ဘာ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ အကြမ်းဖက်အသင်းအဖွဲ့များစာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ၉/၁၁ တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂကလည်း ETIM အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုသတ်မှတ်မှုအတွက် အခြေခံအကြောင်းအရင်းက မခိုင်လုံပါဘူး။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေက လူအများအပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ တရုတ်အစိုးရက ETIM အဖွဲ့ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစွပ်စွဲချက်တွေအတွက် ခိုင်မာတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေ မရှိပါဘူး။ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်တို့မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ ETIM အဖွဲ့ဝင် ဝီဂါလူမျိုး ၂၂ ဦးကို ဂွါတာနာမိုအကျဉ်းထောင်အတွင်း စစ်ဆေးရာမှာ ETIM အဖွဲ့က လုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက် ရခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၂ ခုနှစ် သူတို့ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေအရ ETIM အဖွဲ့ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်တဲ့ အဖွဲ့ငယ်လေးသာဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်ဝါဒ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေက အရေးမပါခဲ့ပါဘူး။ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံအားပေးမှု၊ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို အမြတ်ထုတ်ပြီး သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဝီဂါတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းတာကို အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးအဖြစ် တရုတ်အစိုးရက ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ETIM ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာဟာ တရုတ်အစိုးရက ဝီဂါတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုမှာ အမေရိကန်က ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့မှုရဲ့ အဓိက ပြယုဂ်ပါပဲ။
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း တရုတ်အစိုးရက ပြုလုပ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုတွေကြောင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွေအတွင်း ရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာ ဝီဂါတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ လျော့ကျသွားပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာတော့ ပြည်နယ်မြို့တော် အွမ်ရူကီမှာ ဝီဂါနဲ့ ဟန်လူမျိုးတွေအကြား တင်းမာမှုတွေ ပေါက်ကွဲထွက်လာပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ပြဿနာ၊ ကေလာဟာလတွေ၊ လူမျိုးရေး ဘက်လိုက်မှု၊ လူအဖွဲ့အစည်းတွေအကြား တင်းမာမှုတွေကနေ လူမျိုးအရေးဓိကရုဏ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရုတ်အစိုးရ မှတ်တမ်းတွေအရ လူ ၂၀၀ နီးပါးသေဆုံးကာ တစ်ထောင်ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမတည်ငြိမ်မှုဟာ ကမ္ဘာ့ဝီဂါလူငယ်ကွန်ဂရက်ဥက္ကဌ ရီဘီယာ ကာဒီရ်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဝီဂါလူငယ်ကွန်ဂရက်ဟာ ETIM နဲ့အတူ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။
ဝီဂါတော်လှန်ရေးကို အကြမ်းဖက်၀ါဒလို့ သတ်မှတ်တာကို အကြောင်းပြုပြီး တရုတ်အစိုးရဟာ ရှင်ကျန်းပြည်နယ်က ဝီဂါလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ရှင်ကျန်းပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ချန်ကျန်ဂိုကို ခန့်အပ်လိုက်ပြီးနောက် စောင့်ကြည့်၊ တင်းကြပ်ဖိနှိပ်မှုတွေ ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရှိရာ တိဘက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၊ ပြင်းထန်တဲ့ ရဲလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဝါဒသွတ်သွင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ချန်ကျန်ဂိုက ရှင်ကျန်းမှာ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
မျက်လုံးစကန်ဖတ်တာ၊ ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီ လိုက်စစ်တာ၊ ပြင်ပမီဒီယာတွေ ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်တာ၊ အကျဉ်းစခန်း ကွန်ယက်ကြီးတွေ တည်ဆောက်တာ စတဲ့ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး နည်လမ်းတွေကို ဝီဂါပြည်သူတွေ ခါးစည်းခံလာရပါတယ်။
‘ဟန်’ လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ လူနည်းစုတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုစံနှုန်းတွေ ကျင့်သုံးမှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အဲဒီအထဲမှာ ပုဝါဆောင်းတာ၊ မုတ်ဆိတ်ထားတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဝီဂါတွေကြားမှာ ဘာသာရေးအမှတ်သညာ ကျင့်သုံးတာကို သံသယဖြစ်စရာ၊ ‘အကြမ်းဖက်’ လက္ခဏာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝီဂါတွေ အစိုးရဲ့ ပေါ်လစီကို ဝေဖန်တာ၊ အခြေခံအခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် တောင်းဆိုတာတွေကို ‘အစ္စလာမ့်မစ် အစွန်းရောက်ဝါဒ’ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ’ လို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက တံဆိပ်ကပ်မှုဟာ မွတ်စလင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်က ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒအဖြစ် အလိုအလျောက် ပုံဖော်လိုက်တာနဲ့ ဘာမှမကွာပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဝီဂါတွေ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းခံရမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဂရုဏာသက်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်အစိုးရရဲ့ အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ ဝီဂါတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဟာ ဝီဂါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ETIM ကို ​အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းစာရင်းကနေ ဖယ်ဖျက်လိုက်ပြီး ဝီဂါတွေအပေါ် တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုကိုလည်း လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဝီဂါလူမျိုးတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုမှာ အမေရိကန်က အဓိကကျတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံကတာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ လက်ခံထားမှုဟာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အမေရိကန်ရဲ့ ‘အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးစစ်’ ကြောင့် ဝီဂါတွေအပါအဝင် ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော မွတ်စလင်တွေရဲ့ဘ၀တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
(Aljazeera သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြထားသည့် How 9/11 helped China wage its own false ‘war on terror’ဆောင်းပါးကို လေးမောင်က ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်)
Tags: China, Islam in China, Uighur Muslims